Creative Writing » ————————-	28
ခင်ဇော် says: ၂ မျိုးပေါ့ ညီမလေးရဲ့။
Kaung Kin Pyar says: မချွိပြောတာကို နားလည်ပါတယ် အမရယ်…။ သီလရှင်ကျောင်းတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထက် လှူသူ နည်းပါလိမ့်မယ်….။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမွန့်တုန်းကတော့ သီလရှင်ဝတ်တာ အိမ်နားက ဘုန်းကြီးးကျောင်းမှာ.. မြို့မှာလည်း သီလရှင်ရှိတဲ့ကျောင်းက မရှိသလောက်ဆိုတော့.. အဲဒီကျောင်းမှာက အဆင်အပြေဆုံးပဲ… သီလရှင်ဆရာကြီးကို အမေက သွားလျှောက်တော့ ကြိုက်သလောက်လှူပါတဲ့.. ကျောင်းမှာတော့ ဆရာလေးအပါး (၂၀)လောက်ရှိတယ်.. မလှူလည်းရတယ်.. တစ်ပါးကို တစ်ရာ နှစ်ရာလောက်လှူလည်း ရတယ်တဲ့.. အမေ့ဆီက အဲဒီစကားကို ပြန်ကြားရတော့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်… ဆရာလေးတွေမှာ တစ်ရာနှစ်ရာပဲ အလှူခံရနေကျမို့ထင်တယ်လို့တောင် တွေးမိသွားတယ်.. အဲဒါနဲ့ တစ်ပါးကို တစ်ထောင်ဆီ စာအိတ်ထဲ ထည့်လှူလိုက်တယ်… ပို့စ်ကို ပြန်ဆက်ရင်.. လိုအပ်တာကို ပြောပြလို့ စေတနာနဲ့ လှူတာက တစ်မျိုးပေါ့.. အခုက ငွေကြေးပမာဏကို ပြောချင်သလောက်ပြောတောင်းနေတာကတော့ စေတနာထဲ မထည့်သင့်ဘူး ထင်တာပဲ..
Kaung Kin Pyar says: ဒီကျောင်းက နာမည်ကြီးပါ….။ လှူတဲ့သူတွေလဲ ပေါပါရဲ့….။ ဆွမ်းကိစ္စ ပူပင်ရလို့…တရားဖြောင့်ဖြောင့် အားထုတ်နိုင်အောင်…လှူရတယ်ဆိုရင်လဲ…ဟုတ်ရဲ့…
Alinsett@Maung Thura says: လမ်းမှာ ဖိနပ်တော် ပြတ်သွားလို့ အလှူတော် ခံတဲ့ ကိုယ်တော်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တော်ထက်စာရင်
Kaung Kin Pyar says: ဖိနပ်တော် ပြတ်သွားတာက စေတနာရှိသလောက် အေရဲ့….။ မကောင်းတာတော့ မကောင်းတာပါပဲ…။ လိုင်းကားစီးချင်လှပါချည့်ဆိုလို့…ခရစ်ယန်…နော်ဝေးသူတစ်ယောက်နဲ့ လိုင်းကားအတူလိုက်စီးပေးလိုက်တာ….စာရွက်လိုက်ဝေပြီး အလှူခံတဲ့ကိုရင်နဲ့ တိုးပါလေရော့လား….။ သူမေးလို့ ကိုယ်ဘယ်လိုပဲလှည့်ပတ်ဖြေဖြေ…လိုရင်းက ဒါပဲလေ….။ မမကတော့…မြန်မာပြည်က ဘုရားသားတော်တွေ ဒီလို ဖြစ်နေတာကို နှာခေါင်းတော် ရှုံ့သွားလေရဲ့….။ သို့သော်..ဒါကတောင် စေတနာရှိမှပါ….။
naywoon ni says: သူဂျီးဘယ်​​ရောက်​​နေပါ့လိမ့်​ သူမလာခင်​ သူ့စကား ဦး​အောင်​​ပြောမှ ​လောကုတ္တရာ …. ဘာသာ​ရေးနွယ်​ဖက်မှာ.. လူတွေရဲ့စွမ်းအား.. အလုပ်အကိုင်.. ပါဝါ.. အင်အားတွေအသုံးများနေတာဟာ..
ရာက်နေတယ်လို့  လစ်​ဘီ ၀ှစ်​၀ှစ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: အခြစ်ကို ဓမြတိုက်လျင်ဂေါ ခြစ်ကင်းကောင်ပြာလေး..
naywoon ni says: အု​ကျောင်​ဂျီး ဓပြ တိုက်​တယ်​ စိုတာ နစ်​​ယောက်​ထဲတိုက်​လို့ မရဘူးဗျ ။ အနဲဆုံး လူငါး​ယောက်​ရှိမှ တည်​ဆဲ အုပ​ဒေ အရ ဓပြမှု ​မြောက်​တယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ငမ့်…
အူးစည် says: အခြစ်ကို ဓမြတိုက်ဒဲ့ ခေတ်ဟုတ်တော့ဘူး.. ဒဘိတ်မှောက်တဲ့ခေတ်တွားပွီ။
နော့.. ကောင်းဂင်ပျာနေး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တကယ်​သီလရှင်​၀တ်​ဖို့ပဲသက်​သက်​ဆိုရင်​​တော့ သာမန်​​ကျောင်း​လေး​တွေမှာဝတ်​ပြီး တသိန်း​လောက်​လှူရင်​ကို ၀မ်းသာ​နေကြမှာပါကွယ်​
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ် မသော်ရေ…
မွသဲ ( 17082011 ) says: အသိတယောက်က မကြာခဏတရားစခန်းဝင်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ဝင်တဲ့တရားစခန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအကျယ်ကြီးမှာ အနောက်ဖက်ကို ယောဂီဆောင်တွေဆောက်ပေးပြီးသီလရှင်တွေကို တရားပြရင်း တရားစခန်းစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်ပေါ့။ နောက်တော့ သူတရားစခန်းမဝင်တာ တော်တော်ကြာနေတော့မေးကြည့်တာပေါ့ တရားစခတ်းမဝင်တာကြာပြီနော်လို့ဆိုပီး။ သူကရီပီးပြန်ပြောတာက အမှု့ဖြစ်နေလို့ တရားစခန်းပိတ်ထားသတဲ့။ တရားစခန်းကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးက ဘုန်းကြီးဆီက မြေတခြမ်းရလိုမှု့တရားစွဲထားလို့ပါတဲ့။
Kaung Kin Pyar says: လောကီအရေးစိတ်ကုန်လို့ လောကုတ္တရာထဲ ၀င်ခါမှ…လောကီထက် ရှုပ်တာတွေ ဖြစ်နေတယ်…။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: သူတို့မှာလည်း သူတို့အ​ရေး သူတို့ပြသနာ​တွေက ​လောကီအ​ရေးထက်​​တောင်​များ​နေတတ်​တာ​တွေရှိပါတယ်​မွသဲ​ရေ
Kaung Kin Pyar says: ဒါကြောင့်လဲ တကယ်တရားရသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လူတွေကိုရှောင်တာ ဖြစ်မှာပဲ…နော်…။ သီလရှင်ဘ၀မှာတောင် အပူတွေများနေရတယ်လို့….
ကြွေလွင့် ပန်း says: ပြောရမယ်ဆို ကျုပ်အဖွားက မယ်သီလရှင်ကြီးအနေနဲ့ ပထမကတော့ ထောက်ကြန့်က ပုပ္ပါးကျောင်းမှာဝတ်တယ်၊ ၀တ်ဆို ကျုပ်အဖိုးက မှော်ဘီသံချပ်ကာတပ်ရင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံထမ်းဆောင်နေတုန်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချော်လဲပြီး ဦးဏှောက်သွေးကြောပြတ်ဆုံးတာကိုး။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျုပ်အဖွားက ငယ်ငယ်ကတော်တော်ချောဆိုပဲ။ အသက်ကြီးတဲ့ထိ သွားတွေမစုံတာရယ်၊ အရေပြားတွေတွဲတာရယ်၊ ခါးလေးကိုင်းတာရယ်ကလွဲရင် တော်တော်ချောတာလား။ ဒီတော့ မသေခင်က ကျုပ်အဖိုးက မေးဖူးတယ်၊ ငါသေရင် နင်ဘာလုပ်မလဲတဲ့၊ နောက်ယောကျာ်းယူမှာလားဆိုတော့ မယ်သီလရှင်ဝတ်မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့လို့ဆိုပြီး ကျူပ်အဖိုးလဲဆုံးရော သူလဲ မယ်သီလရှင်ဝတ်ပါရော။ သားသမီး ၈ ယောက်ပါ သူ့ကျောင်းပေါ် သောင်တင်လေရောပေါ့။
ကြွေလွင့် ပန်း says: မှားတာဗျာ (တင်များရှင်) မဟုတ်ဘူးနော်၊ ဆင်များရှင်
Kaung Kin Pyar says: ယောဂီလဲ မထူးပါဘူး ကိုကြွေလွင့်ပန်းရယ်….။ အဖွားဆီလတိုင်းလာလည်တဲ့ ယောဂီအဖွားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်….။ ကောင်းကင်ပြာအဖွားကလဲ စကားပြောဖော်လိုချင်၊ ဟိုဘက်အဖွားကလဲ စကားပြောဖော်လိုချင်နဲ့မှာ… အင်းးးး တရားအကြောင်း နည်းပါတယ်….။
kai says: သီလရှင်ဆိုတာ.. ထေရီ..။ ဂေါတမဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတော်မူတဲ့ … ရဟန်းမကို မြန်မာပြည်မယ်… လုပ်ခွင့်မရှိဘူး.. မရဘူးဆိုပြီး.. ထေရာဝါဒက….ရဟန်းဝတ်တဲ့မိန်းမတွေကို နှိမ်ချခေါ်တဲ့ အခေါ်ပါ..။
ဒီခေတ်မီဒီယာတွေ.. ထေရာဝါဒရဲ့ပုံရိပ်အစစ်ကို.. လှစ်ပြဖို့..တာဝန်ရှိတယ်..။ အချိန်ကျပြီထင်…။ ==========================
kai says: အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် ခရစ်ယာန်သီလရှင် အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့် ခံရမှုကြောင့် အိန္ဒိယတွင် ဆန္ဒပြ
Kaung Kin Pyar says: သီလရှင် မယ်ကင်းကို ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး မိန့်တဲ့…
“ ဘိက္ခူနီ ဆရာကင်း တဏှာကွင်းစွပ်မယ်၊ ဗလာကျင်းဝတ်ထည် ကို၊ ချွတ်ပယ်မယ်ကုန်ဖွင့်၊ ကူပွေ့ လို့ လူတွေ့ ခံတယ်၊ မြူရွှေ့ ဟန်ဆိုးတဲ့ အကျင့်၊ ပြာတဆုပ် နှင့် မဂ်သုတ်သင်တယ်၊ စက်ဆုပ်ချင်သထင့်၊ မန်းသေလာတောင်မြင့်မှာ၊ ဖေါ်မလင်ဧကစာ၊ လင်မျှော်ကာ ပန်ရည်ရိပ်ကယယ်နှင့် ကြံစည်စိတ်များလှတော့သာ၊ ပုတီးသုံးလို့လူပုန်းရှာတယ်၊ သူနှုန်းကာ ငြိမ်သက်နှင့်၊ ကြံရက်တဲ့သီလသယ်၊ ထူးပေ့ အံ့ဖွယ်၊ လောဘနှင့် မောဟ တွယ်သည်၊ တောခတယ် မယ်ကင်းတဲ့ လေး ” ဒါလေးကိုတော့ တချို့စာအုပ်တွေထဲ ဖတ်ဖူးတယ် သဂျီးရဲ့….
Wow says: တချို့ကျောင်းတိုက်တွေလဲ အဲ့လိုမဟုတ်ရှာပါဘူး ကင်းကောင်လေးရယ်…
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်မယ် မ၀ါးရေ….။ ကျောင်းတိုက်တွေတော့ မတူလောက်ပါဘူး….။ ဒါပေမယ့် အမေပြောတဲ့ ဖုန်းကို ဘေးနားကနားထောင်မိရင်း….အကုသိုလ်များမိတာပါ….။
မြစပဲရိုး says: သီလရှင် ဝတ်တာ နဲ့ ဒီ အတိုင်း ယောဂီ ဝတ် တာ ဘာများ ကွာလို့ လဲ ကင်းကောင်လေး ရယ်။
lol:-))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -တစ်ခါတစ်တော့လဲ ..တောကြိုအုံကြား လှည့်သွားပြီးး.
-ဘာသာရေးမှာတောင် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွဲနေတာမြင်ပီး စိတ်ပျက်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ကောင်းကင်ပြာ သာ သီလရှင် ၀တ်လိုက်ရင်